किन लगाइन्छ जनै ? यसको वैज्ञानिक महत्त्व के हो ?
Wed, Dec 11, 2019 at 6:12pm
प्रेस युनियनको महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने #आहा खबर# टान र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सचिवालयबीच सम्झौता #आहा खबर# प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग गर्दै अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन #आहा खबर# श्रीएयरलाइन्सको जनकपुर र सिमरामा परीक्षण उडान #आहा खबर# शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति बन्द गर्नुहोस् : मुख्यमन्त्री पौडेल #आहा खबर# ठगी गर्ने म्यान पावरलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछौँः श्रममन्त्री यादव #आहा खबर# बिहीबार सार्वजनिक बिदा छैन : गृह मन्त्रालय #आहा खबर# ‘पिँजडामा पालिएका कुखुराबाट उत्पादित अण्डा अस्वस्थकर’ #आहा खबर# ‘सबै गाउँमा सडक, बिजुली र खानेपानी’ #आहा खबर# नयाँ हवाई नीति ल्याउँदै सरकार, १५ वर्षपछिको नितिमा के छ नयाँ ? #आहा खबर# सरकार खेलकूद क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री #आहा खबर# सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन #आहा खबर# मालढुङ्गा–बलेवा सडक हस्तान्तरणको चरणमा #आहा खबर# दोस्रो संस्करणको पिपिएलको खेल तालिका सार्वजनिक #आहा खबर# सागमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई ९ लाख दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा #आहा खबर#
बुधबार, २९ श्रावन २०७६,	आहाखबर	9.1K
भोलि बिहीवार जनै पूर्णिमाका दिन व्रतबन्ध गरेका द्विजातिहरूले जनै फेर्ने गर्छन् ।
सनातन हिन्दू धर्मका १६ संस्कारमा उपनयन संस्कार अन्तर्गत जनै लगाउने गरिन्छ । यसलाई यज्ञोपवीत संस्कार भनिन्छ । जनै लगाउने पवित्र मन्त्र यसप्रकार छ : ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेयर्त्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥
जनैलाई उपवीत, यज्ञसूत्र, ब्रह्मसूत्र लगायतका नामले पनि चिनिन्छ । जनै धारण गर्ने परम्परा वैदिक कालदेखि चलिआएको छ ।
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेयर्त्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥
धार्मिक महत्त्वको कुरा गर्दा द्विज बालकले जनै लगाएपछि नै यज्ञ तथा स्वाध्याय गर्ने अधिकार पाउँछ । द्विजको अर्थ हुन्छ अर्को जन्म ।
जनै तीनवटा पवित्र सूत्रबाट बन्छ । यसलाई देब्रे काँधमाथि तथा दाहिने हातमुनि लगाइन्छ । तीन सूत्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेशलाई प्रतीक बनाएका छन् । देवऋण, पितृऋण र ऋषिऋण अनि सत्त्व, रज र तमको प्रतीक पनि यसलाई मानिन्छ । यी तीन सूत्रहरू गायत्री मन्त्रका तीन चरणको र तीन आश्रमको पनि प्रतीक हो ।
जनैको लम्बाइ ९६ औंला हुन्छ किनकि जनै धारण गर्ने व्यक्तिले ६४ कला र ३२ विद्या सिक्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । बत्तीस विद्या चार वेद, चार उपवेद, ६ अंग, ६ दर्शन, तीन सूत्रग्रन्थ र नौ अरण्यक मिलेर बन्छन् । चौसट्ठी कलामा वास्तु निर्माण, व्यञ्जनकला, चित्रकारिता, यन्त्र निर्माण लगायत पर्छन् ।
जनैको एक सूत्र चुँडियो वा जनै लगाएको ६ महिनाभन्दा बढी समय भयो भने बदल्नुपर्छ । चुँडिएको जनै शरीरमा धारण गर्नुहुँदैन । जनै मैलिन थाल्नुअघि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमा जन्म वा मरणको सूतकपछि जनै बदल्ने परम्परा छ ।
यसको वैज्ञानिक महत्त्व
कानमा जनै बेर्दा सूर्य नाडी जागृत हुन्छ । कानमा जनै बेर्दा पेट सम्बन्धी रोग र रक्तचापको समस्या हट्छ । जनै धारण गर्दा विद्युत् प्रवाह रेखा नियन्त्रणमा रहन्छ र काम क्रोध नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । जनैले पवित्रताको अनुभव गराउँछ । मनलाई खराब काममा लाग्नबाट यसले जोगाउँछ ।